दिपक दिपाले ‘छक्का पञ्जा ३’ मा रेखा र साम्राज्ञी लिए « Ramailo छ
दिपक दिपाले ‘छक्का पञ्जा ३’ मा रेखा र साम्राज्ञी लिए
‘छक्का पञ्जा’ सिरिजमा नायिका हेरफेर भएका छन् । दिपकराज गिरी र दिपाश्री निरौला क्याम्पको ‘वडा नं ६’ देखि छक्का पञ्जा २ मा रहंदै आएकी नायिका प्रियंका कार्की छक्का पञ्जा मा नहुने भएकी छन् । यस्तै नायिका स्वस्तिमा खड्का पनि नदोहोरिने पक्का भएको छ । प्रियंका र स्वस्तिमाको ठाउँमा कुने हिरोइन भए त तय ?
‘हामीले लेडी हिरो र अहिलेकी स्टार नायिकालाई ‘छक्का पञ्जा ३’ मा लिने पक्का गरेका छौं । यो हाम्रो टिमको नै निर्णय हो’, निर्देशक दिपाश्री निरौलाले भनिन् । निर्देशक निरौलाका अनुसार छक्का पञ्जा ३ मा लेडी हिरो रेखा थापा र युवा पुस्ताकी स्टार नायिका साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहलाई अनुबन्धित गरिएको छ । फिल्ममा रेखा र साम्राज्ञी नै मुख्य नायिकाको रुपमा रहनेछन् । उसो त ‘छक्का पञ्जा ३’ मा अनुबन्धित भएसँगै रेखाले आफ्नो होम प्रोडक्सनको नयाँ फिल्मको छायाँकन केही समय पर सारेकी छन् । यो रमाईलो भिडियो हेर्नुस् :
यता साम्राज्ञी पनि ईन्टुमिन्टु लण्डनमा को सुटिङ हतार हतार सक्न लागि परेकी छन् । नायिका परिवर्तन बारे निर्माता, स्क्रिप्ट राइटर तथा अभिनेता दिपकराज गिरी भन्छन्, यो कथाकै माग हो । रेखा जी र साम्राज्ञीसँग काम गर्ने हाम्रो टिमको चाहना पनि हो । दशैंलाई रिलिज तोकिएको ‘छक्का पञ्जा ३’ रेखा र साम्राज्ञीको ईन्ट्रीसँगै थप प्रतिक्षित बनेको छ ! वास्तविकता के हो यहाँ क्लिक गर्नुस् :